माओवादी केन्द्रभित्र ‘भाँडभैलो’ ! माअोवादी नेताहरूलार्इ नै थाहा छैन कति छन् अायोजक समिति सदस्य | NepalDainik
माओवादी केन्द्रभित्र ‘भाँडभैलो’ ! माअोवादी नेताहरूलार्इ नै थाहा छैन कति छन् अायोजक समिति सदस्य
काठमाडौं । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रभित्र अहिले पार्टीले अवलम्बन गर्ने वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशादेखि सांगठनिक संरचनासम्ममा भाँडभैलो छ। पार्टी संगठनात्मक कार्यविधिबमोजिम बनाउनुपर्ने संरचना बनेको छैन भने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय केन्द्रीय समितिकै कति नेता अहिले कुन अवस्थामा छन् भन्ने नेतृत्वलाई नै थाहा छैन।
पार्टीको केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म कहाँ कति संख्याको कमिटी बनेको छ भन्ने तथ्यसमेत माओवादी केन्द्र्रसँग छैन। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नारा सबैभन्दा बढी उठाउँदै आएको उसले भद्दा र ठूलो आकारका संगठन निर्माण गरेको छ। ठूलो आकारका संगठन बनाएपछि माओवादी आफैंले भन्दै आएको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को अभ्यास उसका सदस्यले कमिटीमा बसेर गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा पार्टी संगठनमा निर्णय गर्ने अधिकार सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित छ। त्यसमाथि नेतैपिच्छेको गुटले पार्टी संगठनलाई कमजोर बनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा समाचार छ।
पार्टी सचिवालय बैठकमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र ‘जोवन ढल्काउने’ र ‘गुटबन्दी’ गर्ने नेताहरू देखिएको भन्दै कि गुटबन्दी रोक्न अन्यथा घोषित गुटबन्दी गर्न चुनौती दिनुपरेको छ। पार्टी हेडक्वार्टरमै रहेका नेता ‘सनक’ का भरमा कहिले राजीनामा दिन्छन्, कहिले निष्क्रिय बसिदिन्छन्। पार्टी केन्द्रमै उसको ४ हजारको संगठन बनेको छ ।
No Comment to " माओवादी केन्द्रभित्र ‘भाँडभैलो’ ! माअोवादी नेताहरूलार्इ नै थाहा छैन कति छन् अायोजक समिति सदस्य "